Duulimaadyada Atlasjetin London ayaa Bilaabmay | RayHaber | raillynews
HomeGUUDGaadiidka Atlasjetin London ayaa bilaabmay
02 / 05 / 2014 GUUD, Headline
Duulimaadyadii London ee Atlasjet ee London ayaa bilaabmay: Diyaaradihii Atlasjet ee loo qorsheeyay inay ka duulaan garoonka diyaaradaha ee Istanbul Ataturk iyo garoonka diyaaradaha ee London Luton ayaa maanta dhacay (02 jimcihii). Ku farxay rakaabka, duuliyayaashii iyo shaqaalihii diyaaradda waxaa la diray ubaxyo iyo 200-seat Airbus A321-200. Laga bilaabo afar maalmood usbuucii, duullimaadyada London ayaa la heli doonaa maalin kasta ee usbuuca laga bilaabo Juun.
Maanta, Atlasjet waxay duullimaadkeedii ugu horreeyay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Istanbul Ataturk waxayna u duushay garoonka diyaaradaha ee London Luton (02 jimcihii). Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Atatürk, wakiillada Atlasjet waxay u soo bandhigeen Turkish Delight rakaabkii saarnaa diyaaradda waxayna ubax siiyeen duuliyihii iyo shaqaalaha garoonka.
Inta lagu guda jiro safar afar saacadood ah oo lagu tagayo London Luton Airport, Atlasjet waxay ku duushaa rakaabkeeda xNUMX-kursi Airbus A200, iyagoo u siiya fuul raaxo leh kuraasta maqaarka ballaaran ee 321cm. Rakaabka tikidhada ee EconomyPlus waxay ka faa'iideysan karaan boorsooyinka 77 rodol iyo daaweyn macaan oo bilaash ah duullimaadyada London.
Rakaabka Atlasjet waxay u safri karaan Istanbul meelo badan oo ay ka mid yihiin Gaziantep, Antalya, Izmir, Tehran, Tbilisi iyo Nizhnekamsk marka loo eego waqtiga sugitaanka ee ku habboon London. Rakaabka TRNC waxay u duuli karaan Istanbul iyaga oo aan istaagin Istanbul. Duulimaadka maanta, rakaabka 10 waxay sii wadaan London iyagoo ka soo degaya garoonka diyaaradaha Cyprus Ercan lambarkani waa 28 duullimaadyada soo laabashada.
Adeegga Duulimaadyada 'Chelying Chef' 'ee Duulimaadyada London
Rakaabka Atlasjet ee raba inay safarkooda ka dhigaan kuwo mudnaan leh waxay dooranayaan noocyada kala duwan ee Ganacsiga ee duullimaadyadooda. Rakaabka ku safraya Fasalka Ganacsiga ayaa ka faa'iideysanaya adeegyo gaar ah sida xulasho ballaaran oo kala duwanaansho cunto ah, gunno 100 kilo garaash ah, kiishashka mudnaanta, iyo wareejinta diyaaradda iyadoo lagu raaco gawaarida VIP-da ee garoonka diyaaradaha Ataturk iyagoo ku duulaya kursi ballaadhan oo leh xaddiga 30 cm.
Intaa waxaa dheer, Atlasjet waxay soo dhoweynaysaa rakaabkeeda Class Class oo leh adeeg cusub oo duulimaadyada London ah. Chefs Flying Chefs: Waxay siisaa adeegyo badan oo adeegyo ah raashiinka rakaabka u safraya London ee Fasalka Ganacsiga. Class Flying Chefs yapan oo sameeya dawooyin kaladuwan iyo soo bandhigyo khaas ah oo loogu talagay duullimaadyada 'Class Class' ee duullimaadyada London, ayaa safarkooda ka dhiga mid aad u fiican oo macaan leh iyagoo daryeelaya rakaabka midba midka kale.
Ku imaanshaha London ee ka soo dega madaarka Luton waa mid dhakhso leh oo la awoodi karo
Duullimaadyada, oo bilaabanaya afar maalmood usbuucii oo ay heli doonaan maalin walba laga bilaabo Juun, waxay ka dhacaan garoonka diyaaradaha Luton ee London. Isagoo sheegay in madaarka Luton uu yahay goob faa iido badan leh oo u dhaw magaalada London iyo fududeynta gaadiid, maamulayaasha Atlasjet ayaa sheegaya in rakaabka raacaya tareenka ay gaari karaan bartamaha magaalada daqiiqadaha 21 iyo qiimaha tikidhada aad u macquul ah. Kuwa doorbida jidka weyn, 1 waxay gaari karaan bartamaha magaalada saacad gudaheed oo leh gaadiid aad u raaxo badan marka la barbar dhigo garoomada kale ee mahad leh afarta haad ee isku xirta garoonka diyaaradaha illaa bartamaha magaalada iyagoo raacaya basas ka baxaya albaabka laga baxo. Adigoo ka duulaya madaarka waxaad sidoo kale si sahlan ugu tagi kartaa Midlands iyo waqooyiga England adoo raacaya bas.
Intaa waxaa u dheer, iyada oo ay ugu wacan tahay gaadiidka rakaabka ee sida fiican loo qorsheeyay iyo ee caadiga ah ee gudaha garoonka, rakaabku waxay gaari karaan bixitaanka celcelis ahaan daqiiqadaha 10 ka dib markii ay soo degeen. 1 waxay qaadataa wax ka yar saacad si ay u tagto St Pancras International ee ku yaal bartamaha magaalada London tareen ahaan ka dib markii ay ka soo degeen diyaaradda, oo ay dhammaystiraan shandadihii kastamka oo ay ka baxaan garoonka diyaaradaha. Rakaabka aan boorsada haysan ayaa xarunta imaan kara waqti gaaban.
Dhanka Atlasjet ee Istanbul - Duullimaadyada London, qiimaha tikidhada ayaa ka bilaabma dhan-dhan 68 GBP ee EconomyPlus iyo 168 GBP ee Fasalka Ganacsiga. tigidhada waxaan www.atlasjet.co websaydhka iyo wakiillada idman.
Eurostar waxay bilaabatay duulimaadyo udhexeeya London iyo Marseille (Video)
Abaabulka Abaalmarinta Ardayda Qaranka ee Koowaad
Racfaanka GCC ee Raadiyaha Izmir ayaa ka yimid Urur-Pesa Consortium